Yakha Izikweletu Zakho Zobumbano - Ubunikazi Bokukweletwa Kwebhizinisi
Umazisi wakho webhizinisi
Isikweletu sebhizinisi lokwakha sidinga inombolo ye-EIN. Njengephrofayili yakho yekhredithi yakho isuselwe kunombolo yakho Yezokuphepha Emphakathini njengokukhonjwa kwakho, umazisi wakho webhizinisi uzosuselwa kwi-ID yakho yeNtela, noma i-EIN (Inombolo Yokuzazisa Yomqashi Yenqubomgomo) oyinikezwe i-IRS. Uma ungenayo vele inombolo ye-EIN yebhizinisi lakho olakhela isikweletu, kuzofanela uthole eyodwa. Izinkampani Ezihlanganisiwe zingaba ne-EIN yakho namuhla, shayela i-1-800-Company ngemininingwane. Uma ushintshe igama lenkampani yakho noma usanda kwenza ibhizinisi lakho, udinga ukuthola inombolo entsha ye-EIN kusuka ku-IRS.
Unezinketho eziningana lapha, okokuqala ungaqedela Ifomu le-IRS SS-4 bese uyithumela ku-IRS ukuze icubungulwe. Noma ukwazi faka isicelo ku-IRS online. Uma ngabe une-EIN futhi wabeka kahle inombolo yakho, unga Thintana nabakwa-IRS ukuxazulula leso simo. Kungadingeka buyekeza ikheli lakho noma imininingwane nge-IRS ukuze uqinisekise yonke imininingwane yakho ilungile ngaphambi kokuqala ukwakha isikweletu sebhizinisi.
Ungafuna ukubuyekeza izinkombandlela ze-IRS ukunquma uma wena dinga i-EIN entsha ngaphambi kokuba uqhubeke.
Qinisekisa Ulwazi lwebhizinisi Lokwakhiwa Kwesikweletu
Ibhizinisi lakho linephrofayili nezinhlaka eziningi, ezibandakanya, isimo ofakwe kuso, i-IRS, ibhange lakho nanoma yisiphi isiqondisi noma amarekhodi osizo we-411. Udinga ukuthi uqinisekise ukuthi konke lokhu kusesikhathini ngolwazi lwamanje nolulungile. Khumbula ukuthi ikheli lakho lebhizinisi elisemthethweni, alikwazi ukuba yibhokisi le-PO kanye nenombolo yocingo yebhizinisi okungeyona eyakho noma yomugqa wendlu, ngakho-ke uma usuqede izinyathelo zokulungiselela ngaphambi kwalokhu, kufanele uqinisekise ukuthi yonke imininingwane ye-ejensi ivuselelwa futhi izohambisana nolwazi lakho faka lapho wakhe iphrofayili yesikweletu sebhizinisi lakho.
Kudingeka Umeshi Oqondile
Imininingwane kumele ifane ngqo kuwo wonke amarekhodi ebhizinisi lakho wokuhlonza nezinhlu ze-ejensi. Uma igama lakho lebhizinisi liyi "Ukulungiswa kwe-ABC, Inc" futhi uthola imininingwane ebhalwe "Inkampani Yezokulungisa i-ABC" noma "Ochwepheshe Bokulungisa i-ABC", idinga ukushintshwa. Esinye isibonelo ikheli lakho, uma liqukethe iyunithi noma inombolo ye-suite, leyo kufanele ifane, okusho ukuthi i- "Suite 700", "#700", "unit 700" ayifani ngenhloso yokwakha iphrofayili yakho yesikweletu sebhizinisi.
Amarekhodi abanikezeli bakho beinsiza kufanele bahlolwe ukuze baqiniseke ukuthi banalo igama lebhizinisi kanye nekheli. Lokhu kufaka phakathi izindleko zakho zensiza, amandla, i-Intanethi, ifoni, okuhlinzekwayo, njll. Kubalulekile kakhulu ukuthi le mininingwane ibuyekezwe futhi ilungiswe uma ingashayi ngqo.
UNobhala Wezwe / Ikhomishini Yezinhlangano - Ihhovisi lombuso elihlanganiswe nalo kufanele libe nemininingwane yakho yebhizinisi yamanje. Le yinto efanayo nokufaka umbiko wonyaka noma isitatimende semininingwane esiqhubeka kumarekhodi omphakathi. Bheka futhi uqiniseke ukuthi amadokhumenti wokufaka kwakho kanye nerekhodi lomphakathi kuyamanje.
Imininingwane ye-IRS - Ungaxhumana ne-IRS futhi uqiniseke ukuthi imininingwane yebhizinisi lakho inembile. Uma une-CPA firm elawula amarekhodi akho, kufanele ikwazi ukubuyekeza imininingwane yakho. Uma udinga ukuvuselela ikheli lakho nge-IRS, ungasebenzisa Ifomu le-IRS i-8832 ukwenza kanjalo.
Ehhovisi leposi - Ungakwazi masinyane buyekeza ikheli lakho nge-USPO besebenzisa isiqondisi sabo se-mover online.
Amanye Ama-ejensi - Abathatha umhlalaphansi, abasebenza ngamaVeterans kanye neHhovisi Lezabasebenzi (i-OPM) imininingwane yokushintshwa kwekheli ingatholakala ekhasini lewebhusayithi lezokuphepha.
Usizo lweSikhombisi ne-411 - Uma ibhizinisi lakho lifakwe kuhlu kunoma isiphi isiqondisi noma isisetshenziswa se-411 yosizo, kufanele uqinisekise ukuthi liqukethe imininingwane yakho yezomthetho evuselelwe oyisebenzisayo ukudala isikweletu sebhizinisi.
Inqubo yokwakha isikweletu sebhizinisi izolula kakhulu nemininingwane yakho ehloliwe, ivuselelwe futhi ingeyamanje. Ngokuhlukahluka okuningi okufanele kubhekwe lapho kusungulwa isikweletu senkampani, isigaba sokulungiselela kumele sibe kahle.
>> Qhubekela Kulesinyathelo Esilandelayo ekwakheni Ikhredithi Yezikweletu - iDun neBradstreet >>
Izikhungo Zokubika Izikweletu Zebhizinisi
Ukuthola Izikweletu Kwebhizinisi
Amathiphu Wekhredithi Webhizinisi
Izikhungo Zezikweletu Ezihlanganisiwe
Izinzuzo Zezikweletu Zenhlangano
Ama-FAQ ama-Corporate Credit
Izinhlelo Zezikweletu Ezihlanganisiwe
Isimo Kwezezimali Zenhlangano
UDun noBradstreet Iphrofayili
Iphrofayili Yesikweletu ye-Equifax
Ukusungula Izikweletu Zenkampani Yebhizinisi Lakho
Zibonele Iphrofayili Yesikweletu
Isikweletu Esiphezulu Sengozi Yebhizinisi - Ukuthi Uyini nokuthi Ungakugwema Kanjani
Ukubaluleka Kokuhambisana Nezikweletu Zebhizinisi
Sebenzisa Izikolo Zakho Ezikweletayo Ukwakha Isikweletu sebhizinisi
Yikuphi Ukuhambisana Nezikweletu Kwebhizinisi Okuhlola Kusebenza Kuwe?
Indaba Yesikweletu Sebhizinisi